IINDIDI ZEEFAUCET ZASEKHITSHINI (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iindidi zeefaucet zasekhitshini (Isikhokelo sokugqibela)
Iindidi zeefaucet zasekhitshini (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwiindidi zokupompa ekhitshini kubandakanya, ukugqitywa okuthandwayo, ukumiselwa kunye nezitayile zekhaya lakho.
Wamkelekile kwisikhokelo sakho kwitepu efanelekileyo yasekhitshini! Apha uya kufumana iintlobo ezahlukeneyo zeefompo, iindawo ezahlukeneyo kunye nazo zonke iingcebiso kunye namacebo phakathi.
Ikhitshi yinxalenye exabisekileyo kwaye isetyenziswe kakuhle ekhaya kwaye ngelixa itepu ingabonakala ngathi iyinxalenye encinci yento enokuthi ichaphazele phantse yonke into oyenzayo ekhitshini. Ukuhlamba itafile kunye neekhawuntari, kuyakufuneka usebenzise itompu. Ukwenza ispaghetti, kufuna itepu. Kwaye, itepu yinto oza kuyidibanisa neetafile zakho ezikhethiweyo. Rhoqo ungade utshatise umbhobho wakho wokugqiba kunye nezixhobo ukwenza ujikeleze ujongeke ngokudibeneyo.
Ukucwangciswa kombhobho wasekhitshini
Ukukhupha i-Faucet yeKhitshi
Tsala itephu yebhobho ekhitshini
Isiphatho Esingatshatanga Sombhobho Wekhitshi
Iiphatheni ezimbini zeBlue Faucet
Ikhompiyutha yasekhitshini enesitshizi esahlukileyo
Uhlobo loRhwebo Ikhitshi yetheyipu
Iindidi zeeFace Faucet
Iindidi zeziphatho zeBhobho
Iintlobo zeeValuva zeBhobho
Iindidi Zokunyuka Kwethebhu
I-Wall Mount Ikhitshi le-Faucet
Idesika ekhwele itompu
Izinto zeBlack Faucet
Ikhompiyutha yekhitshi igqityiwe
Itheyiphu yamanzi engenanto yasekhitshini
I-Faucet yekhitshi ye-Nickel eBhrashiweyo kunye nePolish
I-Chrome Kitchen Faucet
I-oyile eyiRubhedu yaseKhitshi yetheyiphu
Matte Black Ikhitshi Faucet
Ikhompiyutha emhlophe yekhitshi
Iimpawu zeBlue Faucet
Iindleko zeBlue Kitchen
Ubungakanani Betheyiphu Yekhitshi
Iingcebiso zokuthenga ngebhobho
Iimpompo ziya kuba yenye yezona zinto zisetyenziswayo ekhitshini, kwaye zininzi izinto, iintlobo kunye nolungelelwaniso kubalulekile ukuba ukhethe efanelekileyo kwiimfuno zakho ezithile. Oku kunokubandakanya ukuba ngubani oza kufuna ukusebenzisa isinki, into oya kuyidinga ukupheka ekhitshini, indlela ococeka ngayo, ukuba bangaphi abantu oqhele ukubaphekela, okanye nokhetho lwakho lobuhle.
Isinyathelo sokuqala kwinkqubo yokukhetha iya kukhetha ukucwangciswa. Oku kuya kuba yeyona nto ibaluleke kakhulu ngenxa yeziphumo ezinazo kwezinye izigqibo ekufuneka zenziwe. Ngokusekwe kulungelelwaniso oluthathe isigqibo luya kugqiba ukuba loluphi ukhetho onokulufaka, izixhobo, ogqityiweyo kwaye ngakumbi iindleko zombhobho. Isishwankathelo soqwalaselo kunye nenkcazo nganye ingezantsi. (Jonga eli phepha ukufumana ezinye izimvo malunga iintlobo zeesinki zasekhitshini )
Tsala itepu yasekhitshini uyilo olulodwa lokuphatha- Jonga eWayfair
Ukukhupha iipompo zekhitshi zineentloko ezinokukhutshwa ezinokukhupha ngombhobho okanye inyoka. Oku kuyenza ukuba ibe sisixhobo esiluncedo kakhulu, nokuba yeyiphi na i-engile enokufuna ukufikelela kuyo. Uyilo lokukhupha itepu luyakuvumela ukuba usondele kwizinto ozicocayo kwaye uqondise ukuhamba kwamanzi kanye apho ufuna ukuya khona.
Ukukhupha iifompo zinoyilo olunye lomngxunya kwaye zihlala zixhotyiswe ngento enokutshiza. Ziluncedo ekuhlambeni izitya, ukucoca isinki okanye ukutshiza ngaphakathi kwiimbiza neepani.
Thatha uyilo lwetephu yekhitshi- Jonga eWayfair
Ifana kakhulu nale nto ikhankanywe ngaphambili yokukhupha umpompo wasekhitshini, ukutsalwa kuya kuba nentloko ehambisekayo. Kule meko intloko iya kuba nakho ukuhambisa kuphela (uyiqikelele!) Ezantsi. Olu khetho lunokuhamba okuncinci kunye nokutshiza kancinci kunye nomngcipheko wokudideka.
Njengolunye lweendlela eziqhelekileyo nezilula zoqwalaselo. Uya kusebenzisa isiphatho esinye ukujikajika usiya ngapha nangapha ukumisela ubushushu kunye nokunyuka nokuhla kwamandla okuhamba. Uninzi luphethe iipompo zasekhitshini nazo zinee-sprayers ezisecaleni, zirhuqe okanye zikhuphe uyilo.
Iipompo ezimbini zokuphatha ikhitshi- Jonga eWayfair
Umbhobho wokubamba ikhitshi ophatha izinto ezimbini owaziwa ngokuba sisiphatho kabini, lolunye uhlengahlengiso olusisiseko nolweqhelekileyo. Uyilo lwesiphatho ezimbini sinesiphatho esahlukileyo samanzi ashushu namanzi abandayo. Ezi zinokuthi zibekwe kwindawo enye, okanye zahluke ngokupheleleyo kumbhobho wonke. Oluqwalaselo lufuna unxibelelwano olwahlukileyo kumanzi ashushu nabandayo afanayo nokuseta kwendlu yangasese.
Itepu yasekhitshini enesitshizi esahlukileyo-Jonga kwi IAmazon
Kwimeko apho ungathanda ukuba itepu rhoqo kodwa ungathanda ukusebenza kompompo wokukhupha, isitshizi esahlukileyo sinokuba lukhetho olufanelekileyo. Le iyakuba sisitshizi xa isuswe iya kutshiza amanzi, ibangele ukuhamba kuyeke. Kungenxa yokuba isiphatho kunikezelo lwamanzi siza kudityaniswa. Ukuhamba rhoqo kuya kusebenza xa isitshizi singasebenzi.
Iikhikhini zorhwebo ziya kuba neesinki ezinde kwaye eziguquguqukayo kuba zisetyenziswa nangaphezulu kunendawo yokuhlala kunye nemisebenzi ebanzi eyahlukeneyo. Isiseko asiyi kuba nesigqubuthelo. Kukho iimodeli eziza kuba neempompo ezininzi kwimifudlana emininzi yokugqiba imisebenzi emininzi.
Pot lokugcwalisa Faucet -Iipompo zokugcwalisa iimbiza zinentamo ekhethekileyo ebizwa ngokuba yintamo yokucacisa, oku kuyakuvumela itephu ukuba ijikeleze ngaphakathi nangaphandle ukufikelela kwiimbiza okanye izinto ezinkulu ukuzizalisa ngokulula. Oku kuhlala kusetyenziswa kwiikhikhini zorhwebo, kodwa kunokufumaneka nakwindawo zokuhlala eziphezulu. Ngokuqhelekileyo zibekwe ngaphezu kwesitovu kwaye ziluncedo ekugcwaliseni imbiza neepani ezinzulu.
Ibhotile yokugcwalisa imbiza ngaphezulu kwesitovu ngaphezulu - Jonga eWayfair
Itafile yekhitshi engachukumisekiyo - ekwabizwa ngokuba yi-Motion Sensor Kitchen Faucet okanye i-Hands Free Kitchen Faucet iya kuvumela umsebenzisi ukuba avule itompu ngaphandle kokudibana. Ezi ziya kuba nenzwa kwindawo esezantsi yetephu, apho umntu abeka khona izandla zakhe ukuhlamba. Iimbiza kunye neepani zinokubangela ukuba inzwa ixhomekeke kwindlela onovakalelo ngayo. Ukulungisa ubushushu bamanzi kuya kwenziwa ngesiphatho.
Itompu yasekhitshini engachukumisiyo - Jonga eWayfair
Iipompo ezingachukunyiswayo zinezinto eziluncedo njengokuthintela ukusasazeka kwebhaktiriya, ukusebenziseka lula kunye nokusebenzisa amanzi amancinci kuneempompo eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, banazo izinto ezimbalwa ezinje ngolawulo lobushushu, iindleko zamandla, kunye nexabiso.
Ukwazi iinxalenye zepompo kuya kwenza ukukhetha izinto kunye nokuqonda i-lingo ngokulula. Iipompo ngokwazo ziyinxalenye esisiseko entle ngokuthelekiswa nezinye izinto zokufaka imibhobho ezifakiweyo. Impompo ebonakalayo ngokwenyani yenziwe kuphela ngamalungu amathathu, intamo, ispout, kunye neziphatho.
Intamo yompompo iya kuba yityhubhu ehambisa amanzi ukusuka echibini ukuya kwispout. Kulungelelwaniso oluthile oku kuyakuza ngobukhulu obahlukeneyo kunye neemilo.
Zintathu iintlobo eziphambili zeentamo, eziyimigangatho, ethe tye, kunye nentamo yerhanisi. Olunye ulwazi malunga noku lungezantsi. Isipompo setompu yinxalenye ekhupha amanzi asuka entanyeni aye kwisinki. Esi siqwenga sinokukhutshwa, xa sikhupha kwaye sikhuphe ubumbeko kwaye sinokuza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu.
Isibambo yinxalenye yetephu evula ize ivale ivelufa evumela amanzi ukuba adlule entanyeni aphume nesiporho. Ezi zinokuba ecaleni kwetephu ngokwazo okanye emazantsi entamo. Ezi ziziphatho eziza kusetyenziswa ngumsebenzisi ophambili ukuvula nokucima itompu.
Ukongeza kwiziqwenga zompompo wasekhitshini kuyakufuneka kubekho imingxunya yokufaka. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokufakelwa ngokusekwe kwinani lemingxunya enayo itepu.
Umbhobho omnye womngxunya uhlala ubonakala ngakumbi. Uyilo lomngxunya olunye lunokuba nesiphatho esinye okanye ezibini kodwa kuya kuba namanzi kuphela avela kumbhobho omnye.
Umbhobho 'webhulorho' unoyilo lwemingxuma ephindwe kabini. Olu luyilo luya kuba nezivalo ezimbini ezidibanisa ukudibanisa amanzi ashushu napholileyo ukwenza ubushushu obufanelekileyo. Uyilo ‘olunabileyo’ okanye olunemingxunya emithathu, ngokusisiseko iyafana, ngaphandle kokuba umbhobho ungaphantsi komphezulu.
Njengoko kucacisiwe ngokweenkcukacha ngaphezulu kwentamo yetephu iya kuba yindlela esuka kwimibhobho iye espoutini, le iya kuba yeyona ndawo inde, neyona iqaphelekayo yombhobho. Zintathu iintlobo ezisisiseko zeentamo xa kufikwa kwiimpompo, kodwa kuhlala kukho indawo yokuyila.
Umgangatho - Intamo esemgangathweni iya kuba yintamo egobileyo. Kulula ukugcwalisa imbiza, gcwalisa isinki, okanye ugcwalise eminye imisebenzi yasekhitshini. Ezi ziza ngobukhulu obahlukeneyo kunye needigri zeejika, kodwa ziqhelekile, zisisiseko sokukhetha itompu. Oku kuya kuba kuhle ukugcina amaxabiso ezantsi xa kungekho sitayile okanye ubunzima kuthintelo kwiprojekthi.
Ngqo - Intamo ethe tye iyazicacisa, iyintamo eya ngqo esinkini, oku kunika indawo encinci yokufumana imbiza ngaphantsi kodwa kukhetho olunokubiza iindleko. Ezi ntlobo zeentamo zihlala zisetyenziselwa kwigumbi lokuhlambela okanye kwiisinki ezinzulu ukuba zisenokusetyenziselwa amandla aso.
Goose Intamo - Intamo yerhanisi iya kuba nemilo ephezulu kakhulu kuyo. Oku kuvumela ukusetyenziswa ngokulula xa ugcwalisa iimbiza. Intamo yerhanisi iya kubiza kancinci kancinci kunesiqhelo kwaye ithi nkqo kuba iya kufuna izinto ezingaphezulu ukuyenza kunye nencindi yokuhombisa.
Ezi zezona ntlobo ziphambili zentamo ezisetyenziselwa iikhitshi. Ukuba ujonge intamo entsha yokuyila ungazama intamo evakalayo, enamalungu amaninzi aya kuthi ancede ukudubula amanzi kwiindlela ezininzi. Olunye ukhetho lwe-décor iya kuba kukugwenxa komalusi, oku ngokuyintloko intamo ethe nkqo kunye negophe elongeziweyo ngaphambili. Oku kongeza indawo eyongezelelweyo xa ugcwalisa izinto kwaye kongeza into yokuhombisa.
Ukuvula amanzi kuwe uya kufuna iqhina okanye isiphatho, ukhetho olulandelayo luya kuba kukuba ufuna enye okanye ezimbini. Esi sigqibo sinokusekwa ekusebenzeni, kwi-aesthetics okanye nokuba kusekwe kwimeko yokuba mingaphi imingxunya ebikade ikwi-counter. Nokuba siyintoni na isizathu sokuba ibe zezi zinto zimbini zisisiseko zezi:
Isiphatho esinye - Uyilo olunye lokuphatha itampu luya kuba nakho ukusebenza ngesandla esinye kuphela. Isibambo singabekwa ecaleni okanye ngaphezulu kwespout okanye ecaleni kwespout ukuba uyilo lwemingxunya emibini. Oku kunokunika uninzi lwezinto onokukhetha kuzo kunye nokuba lula kancinci ukufumana ubushushu obuchanekileyo bamanzi ongathanda.
Isiphatho esibini - Ikwabizwa ngokuba sisiphatho esimbini, lolunye uhlobo lwesiphatho setipu. Iimpompo ezimbini zokuphatha zenza ukuba ubushushu bamanzi buqine ngakumbi, kodwa lukhetho olufanelekileyo lokulinganisa ekhitshini. Olu hlobo luhlala lufumaneka kwiindawo zokuhlambela kwaye luya kuchaphazela ukuba zeziphi iintlobo zoqwalaselo kunye nemingxunya oya kuyibeka.
Uxinzelelo Ivaluva - Ukucinezelwa kwamaxabiso sisiseko sokuhambisa amanzi kumbhobho. Ezi ziya kuba neziphatho ezahlukileyo zokubanda kunye namanzi ashushu kwaye ziya kuba ngathi zizikrufu eziza kucinezela ivelufa ngokuchasene newash. Nangona ezi ntlobo zezivalo zivamise ukuba zezona zilula ukuzigcina zihlala zinxiba okona kukhawulezayo kunokubangela ukuvuza.
Ball Ivaluva -Iimpompo zevalufa zeBhola ziyimpompo ye-washerless. Olu hlobo ngokukodwa lubandakanya isiphatho esinye esihamba ngaphezulu kwemilo yebhola. Ngaphakathi kukho iplastiki okanye ibhola yesinyithi eya kulawula ngaphakathi. Ibhola inamagumbi, i-slots, iiringi zerabha kunye namatywina erabha alayishiwe entwasahlobo ayincedayo ukuba yenze umsebenzi wayo; ukuseta ubushushu kunye nesantya sokuhamba kwamanzi. Oku kuya kuba nzima ngakumbi kunezivalo zoxinzelelo.
Ivaluva yeCartridge -Ivaluva zeCartridge nazo azinayo i-washerless, zisebenzisa ubhedu kunye neplastiki iCartridge ebonakalise ukuba inokuthenjwa. Oku akunzima njengevalve yebhola kwaye kuya kuba lula ukuyilungisa, nangona kungekho ngxaki zininzi kolu hlobo lwevalvu.
Yodongwe Disc Valve -Ienye yeemveliso ezintsha kwintengiso, iiceramic disc valves zikumgangatho ophezulu, zithembekile, kwaye kunqabile ukuba zifune ukulungiswa. Ezi ziya kuba ziipompo zokubamba enye. Iiceramic disc valves zisebenzisa ii-discs ze-ceramic ezimbini ezithi xa zisetyenziswa zityibilikisane ukuze zilawule ukuhamba kwamanzi. Nangona iicalic disc valves yenye yeendidi ezihlala ixesha elide kwaye zihlala ixesha elide, ukuba kukho into efuna ukulungiswa, kubiza kakhulu ngenxa yokuntsokotha kwendlela.
Ukuya phi kunye nendlela yokufaka itephu yekhitshi yinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo ngaphambi kofakelo. Imingxunya iya kufuna ukunqunyulwa kwindawo kunye nokubalulwa kwetephu kunye nokubhobhoza okufuna ukubekwa kwiindawo ezifanelekileyo. Esi inokuba sesona sigqibo siqatha xa kufikwa kumba wokulungiswa, ukubekwa endaweni kunye nokufakwa kwetampu. Imibhobho kufuneka ikwazi ukudibanisa kwiindawo ezithile zompompo ukuze amanzi ahambe. Ngamanye amaxesha ukunxibelelana nomntu otywina imibungu yeyona nto ilungileyo.
Ukubeka itepu eludongeni kunokugcina ikhawuntari icocekile kwaye ingabinanto. Iimfuno zolu hlobo lofakelo zigqithisile, umzekelo, olu hlobo lofakelo akufuneki lisetyenziswe kudonga lwangaphandle. Kungenxa yokuba imibhobho kufuneka inwenwele ngaphezulu kwekhawuntari, ukubeka oku kudonga olungaphandle kunokubangela ukuba imibhobho iqhume kwiindawo ezibandayo.
Ukufakwa kwendawo yokugcina ikhonksi ekhitshini yenye yeendlela ezilula neziqhelekileyo zokufaka. Oku kuyakufuna indawo eyoneleyo yokulwa phakathi kodonga kunye nesitya sokuntywila. Olu hlobo lofakelo luya kufuna ukuba umngxunya ubekwe kwi-countertop uqobo.
Emva kokuthatha isigqibo sokuba loluphi ufakelo oluzakusebenzela iprojekthi yakho, jonga apha ngezantsi malunga neengcebiso zokufaka itephu kunye namacebo.
Ukukhetha into eyenziwe itepu kuya kuba nefuthe elikhulu kubude bobomi betephu kunye nexabiso. Olunye ukhetho lwezinto ezithandwayo lubhedu, intsimbi engenasici, iplastiki kunye ne-zinc. Ayizukubhidekiswa yindlela eliqhekeza eliya kujongeka ngayo, ayisiyiyo eyokugqiba, yinto nje eyenziwe ngayo itompu.
Ubhedu -Ibrass yenye yezona zinto zihlala ixesha elide kwaye kulula ukuvelisa izixhobo zompompo wasekhitshini. I-Brass inokwenziwa kwindidi ezininzi zezinto ezenziwayo, iimodeli kunye nokugqitywa kokuvumela ukhetho ukuba lube phantse lungenamda.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -Intsimbi engenasici yindlela ebiza kakhulu, kodwa ayizukufuna ukugqitywa okongeziweyo, ngamanye amaxesha baya kufaka isambatho esicacileyo njengesithintelo sokukhusela, kodwa bafuna ukugcina ubuhle bentsimbi engenasici.
Ubhedu -Copper ihlala ithoni emnyama kwaye ibhetele kwiisinki zakudala. Oku kuyakudinga ulondolozo ukuze ihlale ikhangeleka intle kwaye ikhazimla.
Iplastiki kunye neZinc -Iplastikhi kunye neZinc zincinci kunokuba zomelele kunobhedu, nangona zifana kakhulu nayo. Rhoqo kwiipompo zobhedu baya kusebenzisa iziqwenga zeplastiki okanye zinc ukunciphisa ubunzima kunye nexabiso. Iplastiki kunye ne-zinc zilula ngokobunzima kunye nokukhanya kwixabiso.
Ukugqitywa kombhobho wokuntywila kubalulekile njengokucwangciswa okanye izixhobo kuba yile nto uyibona mihla le. Ukugqitywa kunokusetyenziswa ngokufakela i-electroplating, ukuthunyelwa komphunga womzimba okanye ukugcoba umgubo. Ukuchongwa kombane yeyona ndlela ixhaphakileyo ngokungeniswa kwibhafu yesinyithi esinyibilikisiweyo esincamathele kumbhobho. Oku kudala ukugqitywa okuhlala ixesha elide kodwa kuchaphazeleka ngakumbi kwiimveliso zokucoca ezinzima.
Indlela ye-PVD isebenzisa isicoci endaweni yokuhlambela ukuze incamathisele ii-ion zentsimbi kumbhobho. Le ndlela ayizukufuna idyasi ecacileyo kodwa ihlala ibiza kakhulu. Ukutyabeka umgubo kuqulethe itepu xa itshizwa ukwenza umaleko nobungqingqwa, kodwa ayomelele njengeendlela ezikhankanyiweyo ngaphambili. Emva kokukhetha indlela kusekho indawo emnandi yokukhetha ukugqiba okwenyani, ezinye iindlela zezi zilandelayo.
Ukugqitywa kwentsimbi engenasici
Insimbi engenasici yenye yesiphelo esithandwa kakhulu, kuthintela ukuqaqamba okukhulu kunye nokuzama ukulungelelanisa izixhobo zasekhitshini. Isinyithi esingenasici yi-goof yeefomethi ezininzi ngakumbi izitayile zangoku kunye nokuthe tye kwiifompu.
izimemo zeshower zomtshato ezishicilelwayo
(Jonga le faucet yentsimbi engenasici e-Wayfair)
I-Faucet yaseKitchen eBhrashiweyo kunye nePrashiweyo
I-nickel e-Brushed iphakathi kwensimbi engenasici kunye ne-chrome, kunye nokukhanya okuphakathi kuphela kodwa i-nickel yombala wesilivere ongwevu inokungena kuzo zombini izithuba zangoku kunye nezemveli. I-nickel epholileyo kwelinye icala isetyenziswa xa ukugqitywa okuqaqambileyo ngumnqweno.
Ukugqitywa kwe-nickle lukhetho olufanelekileyo njengoko lunokutshatisa iindlela ezahlukeneyo zoyilo lwangaphakathi kwaye lunokubhenela ekubeni ngumthunzi owahlukileyo wombala kuxhomekeke kwisibane esisetyenzisiweyo.
I-Chrome yinto eqaqambileyo yesilivere ejonge ukuqaqamba ngokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. I-Chrome yongeza ukugqitywa kwale mihla kuyo nayiphi na indlela yompompo kwaye iya kuzisa ukukhanya kunye nobuhle kwikhitshi elisisiseko ngaphandle kokuyomeleza.
Ngokumalunga nenani lentengiso, i-chrome okwangoku lolona hlobo lokuthengisa lokugqibela lwetephu. Nangona kulungiswa izinto kunye neeprojekthi ze-DIY imeko kukusebenzisa ukugqitywa okukhethekileyo okunje ngeoyile yokuthambisa ibhedu okanye ubhedu ukwenza ingxelo.
I-Chrome ikwabonelela ngokhuseleko lwayo ekungcoliseni. Nangona kunjalo, intsimbi engenasici yomelele ngakumbi kune-chrome iyonke.
Ukufumana ujongo lobhedu konke okudingayo kuya kuba yingubo ecacileyo ngaphezulu kwezinto zobhedu ezisetyenziselwa ukwenza itepu ngokwayo. Okanye ubhedu lunokubekwa ngaphezulu kwento eyahlukileyo ngokunjalo.
Ukugqitywa kweoyile yebronze yokugqiba
I-oyile eyiRubhedu yaseKhitshini yetheyiphu
Olu gqibelo luya kuba lukhetho olukhulu kwizitayile zesiko, longeza imbonakalo ye-rustic. Inokusebenza kakuhle kuyilo lwekhitshi laseMeditera kunye nase-Itali.
Ibronze yebrashi ekhuhliweyo kulula ukuyicoca, kwaye ifihla amabala kakuhle. Icala elisezantsi linokuba lixabiso elihlala lixabiso eliphezulu kunolunye uhlobo lokuthelekisa.
Ngobukeka banamhlanje obufana nesinyithi esenziwe ngesinyithi, umnyama omnyama unokongeza ukuqaqamba okumangalisayo kuyo nayiphi na ikhitshi yesitayile. Nangona kunjalo, oku kugqitywa kuhlala kusetyenziswa ngokufanelekileyo kuyilo lwangoku, lwangoku okanye lweshishini.
Umba omnyama uya kufihla iindawo zamanzi kunye nokuprintwa kweminwe ngaphezulu. Enye into entle malunga nemodeli emnyama emnyama inokwenza ifuthe elikhulu kwinkangeleko yegumbi lakho ngonikezelo olukhawulezayo. Icala elisezantsi kule kunokuba ngumceli mngeni wokudibanisa zonke ezinye izinto ezisegumbini ukuze ufumane inkangeleko oyifunayo.
UMhlophe lukhetho lwangoku, kodwa olunesibindi. Oku kunokucima i-countertop emnyama kwaye kufuneka ufumane isambatho sokukhusela okanye uhlambuluke rhoqo ukuze uhlale kwisimo esiphezulu se-tip. Ingubo ekhuselayo ihlala i-porcelain, ekulula ukuyicoca kwaye ifihle i-smudges kunye neendawo zamanzi kakuhle.
Izinto ezenziwa nge-porcelain zithande ukugqobhoza ngaphezu kokugqitywa kwesinyithi. Ke abo basebenzisa iimbiza ezininzi kunye neepani esinkini kuya kufuneka basebenzise isilumkiso ngakumbi.
(Jonga itephu emhlophe yokugqiba eWayfair)
Zininzi izinto onokukhetha kuzo xa ukhetha itompu ekhayeni lakho. Ukucinga ngento oyenzayo xa usekhitshini lakho kwaye zeziphi izinto oza kuzifuna kuya kunceda ukunciphisa ezona unokukhetha kuzo. Rhoqo unokukhetha amanqaku ahlukeneyo kwaye nganye nganye eyongeziweyo iya kuthatha iidola ezongezelelweyo kwithegi yexabiso.
Iimpawu ezaziwayo zompompo wasekhitshini zibandakanya:
Ukuphakama okulungelelanisiweyo, okunokunceda xa ufuna ukuzalisa iimbiza ezinde okanye ukuhlamba izinto ezinkulu. Njengoko igama licebisa ukuba liyakuvumela intamo ukuba ihambiseke ukuyilungisa kwaye iphantsi.
Imibhobho yokucoca amanzi, eya kuthi incede ukwenza ukuba amanzi aphume acoceke. Oku kuyakuvumela amanzi aphuma etephini ukuba asele, ukuba akakabikho, okanye angcamle ngcono. Ngamanye amaxesha oku kunokongezwa kamva kamva.
I-engile ehlengahlengiswayo, evumela ii-angles ezahlukeneyo ekucoceni izinto ezime ngendlela engaqhelekanga okanye ubungakanani. Oku kuya kuba kulungelelwaniso olufana nokuzaliswa kwembiza okanye intamo yokuthetha.
Umjelo onokuhlengahlengiswa, okwabizwa ngokuba yintloko eguqukayo yokuhamba, eya kuthi itshintshe ukuba kuya kuba nzima kangakanani ukuhamba. Oku kuluncedo kwabo bafuna ulawulo ngakumbi ngaphezulu kokuhamba kwamanzi ukusuka kwintengiselwano ukuya kumjelo.
I-swivel spout, evumela ukuhamba okungcono kwespout.
Amaqhosha okulahla inkunkuma okanye ukuhamba kwamanzi.
Izandla zasimahla, ekwabizwa ngokuba ziipompo zentshukumo yesenzi esivumela umntu ukuba ajike itepu ngokubeka nje izandla zakho phambi kwetephu endaweni yokuyichukumisa ukuqala.
Chukumisa uvakalelo, oluya kuvumela umsebenzisi ukuba avule itompu ngocingo olukhanyayo endaweni yokufuna ukufakela ngesandla lever.
Imijelo ecocekileyo elula, egqityiweyo emelana nokubona kunye nokungcola. Oku kuyakujongeka kukuhle phakathi kokucoca kwaye kubengcono ngokuthe ngqo emva.
Amaqondo obushushu aphezulu ayayeka, ekuvumela ukuba ukhethe ubushushu bamanzi ukuba ungaze udlule. Oku kunceda ukuthintela ukutshisa kunye ne-scalding.
Ukonga amanzi, okuya kunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi kodwa hayi uxinzelelo okanye ukuhamba.
I-Aerator Faucet, eya kuthi yongeze umoya kumsinga wokutshiza ngobunono kunye nokutshiza kancinci.
Amaxabiso eefompe ayahluka kakhulu, nokuba uzimisele ukuchitha amawaka okanye ngaphantsi kwekhulu. Kumaxesha angoku amaxabiso ngokubanzi awela kwiimpompo eziziindaba ezimnandi. Kukho ezinye ezikhoyo ukuya kuthi ga kwi-20 yeedola, kodwa kuyacetyiswa ukuba unamathele kufutshane nexabiso lama- $ 200 ukufumana imodeli ekumgangatho ophezulu eya kuhlala iminyaka emininzi yosetyenziso lwemihla.
Ekuhambeni kwexesha iyakukunceda nangayiphi na indlela kuba imveliso eyenziweyo ngexabiso eliphantsi ibeka emngciphekweni omkhulu wokuvuza nokuvuza, ukuchitha amanzi kancinci ngokuhamba kwexesha kwaye kuya kufuna ukutshintshwa nokulungiswa okungaphezulu kwexesha. Amaxabiso aya kuxhomekeka kwizinto eziphathekayo, ukuyila, ukugqiba kunye nomgangatho webhobho.
Ibronzi kunye nobhedu ziya kubiza malunga ne-300 ukuya kwi-500 yeedola, izinto ezingcono (intsimbi engenasici) zinyuka ukusuka apho ngokusekwe kwiindidi kunye neempawu.
Ubungakanani betampu ukufumana kakhulu kuxhomekeke ekhitshini lakho. Ubungakanani bokuntywila bubalulekile, kunye nendawo engaphezulu kwesinki ekhoyo. Ukuba itepu yinto yokugqibela oyifakayo apho kuya kubakho ii-inlets malunga nee-intshi ezi-8 kude enye kwenye, oko kuthetha ukuba itepu kufuneka ibe zii-intshi ezi-8 ubude.
Ngamaxesha athile kukho umngxunya omnye kuphela apho imeko iya kutshintsha ukuba loluphi uhlobo lwetephu oyikhethayo. Umbhobho kufuneka unamathele ujikeleze i-8 intshi ukuya kwi-intshi ezili-12 ukusuka kwisiseko. Kukho iintlobo ezithile kunye nemodeli eya kuthi ivumele ukuba ibe zii-intshi ezili-12 ukuya kwii-intshi ezili-18.
Kwiimeko apho unekhabhathi ngaphezulu kwesinki kuyakufuneka uthathe amanyathelo ongezelelweyo kwaye ulinganise ukuphakama ukuze uqiniseke ukuba itepu iya kulunga phantsi kwekhabinethi. Inzulu kangakanani isinki iya kuba yenye into enegalelo kubungakanani betephu ekhethiweyo. Ukuntywila kumgxobhozo kudla ngokubhetyebhetye ngakumbi. Isinki ezinzulu ziya kufuna iimpompo ezimfutshane ukukhulisa ukuchaneka kunye nokuthintela ukugqabhuka kakhulu.
Kulabo bafuna ukubona ubeko olwahlukileyo ngaphambi kokuthenga, kukho Isoftware yoyilo ekhitshini enokukunceda ube nomfanekiso-ngqondweni ophucukileyo weprojekthi.
Xa uqala ukukhangela ukuthenga itompu entsha kungcono ukuba uthenge isinki kunye netepu ngaxeshanye okanye uthenge isinki kuqala. Umpompo owukhethileyo kuya kufuneka ube nenani elifanayo lemingxunya njengoko isinki ivumela, kwaye zombini isinki kunye nompompo kuyakufuneka zilingane ne-countertop, ke yonke into iyahambelana ngokufanelekileyo. Uya kufuna ukukhetha ubungakanani betephu oya kuthi uyincome isinki yakho, njengoko kuwe ngekhe ufune isigebenga, isepha enkulu engaphezulu ngesinki encinci yesitya, okanye itepu encinci yesinki yobukhulu beshishini.
Umlinganiso wokucoca kunye nokuphakama kwesipout kuya kuqinisekisa ukuba kukho ukufikelela okwaneleyo, njengoko ekuboneni ispout iya kuba inkulu ngokwaneleyo ukugcwalisa zonke izitya zokuntywila kunye nokuhambisa amanzi kwinxalenye enkulu yezinki, ngaphandle kokufumana amanzi ngaphandle kwesinki. Ukukufumanisa oku kuya kumiselwa ngumgama othe tye ukusuka ekuvuleni kwespout ukuya apho idibana khona nesinki okanye kwi-countertop.
Ukutyelela ivenkile yezitena nodaka kuya kunceda ukunika umbono wesitayile kunye nokugqiba okuthandayo. Ukuzisa naziphi na ezinye izinto ezigqityiweyo ezikhoyo ekhitshini ziya kunceda xa ukhetha ukugqiba. Ukukhetha isinki, itepu kunye nemiphezulu yeetafile ngaxeshanye kuya kukuvumela ukuba uqinisekise ukuba konke kugqityiwe ukuhambelana. Vavanya amanqaku ahlukeneyo kunye neentlobo ezikhoyo kwaye ujonge ezona zilungele wena. Ukuvavanya izibambo ukuze uqiniseke ukuba ziqinile okanye zikhululekile njengoko ungafuna kubalulekile kuba le yinto oza kuyisebenzisa yonke imihla.
Kuya kubakho iindlela ezininzi ezahlukeneyo onokufaka ngazo isinki yekhitshi, kuxhomekeke ekubeni iya kuba phezulu na, inyuswe isezantsi, okanye inyuswe ngodonga. Ukunyusa phezulu itepu kuya kufuna ukufakela izikhonkwane nangona emazantsi etephu esuka ngaphantsi kwekhawuntari, ezantsi, ngokuchaseneyo, ukufaka izikrufu ngentla kwetephu.
Ukufakwa kwesinki ayisiwona msebenzi unzima kakhulu, kwaye ngokuqinisekileyo kunokuba yiprojekthi ye-DIY, kodwa ukuba unengxaki ekusebenzeni phantsi kweekhabhathi ngasemva kwakho, ukuqesha isifakeli kunokuba yindlela. Ukuba ufuna ukususa itompu esele ikhona thintela ukusebenzisa iitotshi zepropane ukususa amantongomane anerusi. Kwakhona kuphephe ukusebenzisa i-putty ye-plumber kuba inokonakalisa imiphezulu yeetafile zamatye, kungcono ukuyisebenzisa kunye ne-o-ring engadingi tywina.
Nantsi ividiyo emfutshane malunga nendlela yokufaka itepu yekhitshi:
Ukufakela itephu ngokwakho kuya kuthatha amanyathelo. Phambi kokuba wenze nantoni na qiniseka ukuba iivalvi zamanzi phantsi kwesinki zicinyiwe! Ukuvula itompu kuya kunciphisa uxinzelelo. Ukuba ulahlile, cima umbane kuloo nto.
Ukuba oku kungena endaweni yokuqala kuzakufuneka ususe itompu endala ukwenza indawo entsha. Icebo elinobuchule liya kuba kukuthatha umfanekiso woqwalaselo lwangoku ukuze ulusebenzise njengesalathiso xa usibuyisela kunye. Ukugcina ibhakethi ngaphantsi kuya kunceda ukubamba nawaphi na amanzi okufikelela ngelixa unqamla ipompo endala. Ukususa itompu kuya kufuneka ususe amantongomane abambe itephu endaweni. Emva koko susa kwaye ucoce isinki kumphezulu kunye neendawo ezingqongileyo.
Okulandelayo kuya kufuneka udibanise itompu entsha, ulandela imiyalelo evela kwimveliso ngokwayo (yonke itephu iya kwahluka kuba uyenzile ngaphambili oko akuthethi ukuba ukhululekile kwincwadi yemiyalelo).
Emva kokudibana, beka itompu apho indala ibikhona okanye kwimingxunya emitsha, kwaye ukhusele onke amaqhekeza. Beka i-gasket, iringi yokutrima, ngaphezulu kwemingxunya yesinki kwaye usete ipleyiti yomgangatho. Ukuba eyenziweyo ifuna i-caulk okanye i-putty plumbers, sebenzisa oku ngoku. Yiva imigca yetephu ingena emingxunyeni. Emva koko faka iiwasher kunye namandongomane xa kufuneka.
Emva kokuba yonke into ibekwe endaweni yayo, qhagamshela kwakhona unikezelo lwamanzi. Jonga ukuvuza. Susa i-aerator kwipompo kwaye uvumele amanzi amnandi ngokukhawuleza ukususa kunye neebhule kunye nokucoca imigca. Phinda ujonge ukuvuza. Emva kokuba konke kulungisiwe emva koko cima amanzi kunye ne-voila, kufakwe itephu entsha.
Ezinye izinto zokuqinisekisa ukuba uyayinyamekela ngexesha lale projekthi nazo zilula. Qiniseka ukuba ucoca yonke inkunkuma endaweni yayo, kwaye ulingise yonke imigca yokuhambisa. Nokuba ufuna ukuphinda uhambise imizila esele ikho okanye usebenzise ezi zikhoyo ngoku.
I-Highcraft 393II Ikhompiyutha yasekhitshini, i-Arc Swi ephezulu… $ 79.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1380 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-6 ii-PC zeGumbi lokuhlambela laBantu abaManzi, iiNdoda ezi… $ 9.99 ngexabiso umthengisi ogqibelele (648) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Pot lokugcwalisa Faucet, Stainless Ste… $ 64.90 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-165 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
SUMERAIN Pot Pot Filler Faucet Wall Mount,… $ 103.90 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-382 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Amagama okugqibela athandwayo e-usa
isikhokelo sendawo yombhoxo
into endala into entsha into ebolekiweyo into eluhlaza imibono